Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguAnna
Ukubhukisha ixesha elide kuneveki enye sinikezela nge-20% yesaphulelo esikhethekileyo kwixesha eliphantsi!
Iivillas zethu ezimbini zeKoh Chang Luxury zibekwe kwisiqithi esihle saseKoh Chang empuma yeThailand.
Izindlu zethu zokulala ezimbini ezinemigangatho emibini ziya kwenza iholide yakho yaselwandle ibe yinyani!
I-villa yokuqala yayiyilwe yaza yakhiwa ngo-2013. I-villa yethu yesibini yakhiwa ngo-2014. Zombini ii-villas zayilwa ngabakhi bezakhiwo baseSwitzerland kwaye babambelela ngokungqongqo kwimigangatho yentshona yokwakha ngaphandle kokulahlekelwa ngumtsalane kunye nobuhle bezakhiwo zemveli zaseThailand. Umtshato wayo woyilo lwangoku kunye nolwemveli lwangaphakathi wenze imekobume ephucukileyo netofotofo yeentsapho kunye namaqela abahlobo. Ifakwe kwindlela yokuqala engqamene nolwandle, i-villa yethu ye-Koh Chang yobunewunewu inamagumbi amane okufikeleleka kumntu ngamnye anegumbi lokuhlambela, amathafa amathathu kunye negumbi lokuhlala elikhulu kunye nekhitshi.
4.67 · Izimvo eziyi-36
Iivillas zethu zodidi zibekwe kwilali yaseKoh Chang Siam Royal View eseKlong Son Bay.
Olu lwakhiwo lukhethekileyo lwendlu yobunewunewu yeyona projekthi yaseThailand inomdla ngenxa yomgangatho wolwakhiwo, inani kunye neempawu ezibalaseleyo ezinikezelwayo kunye nendawo ekuyo kwisiqithi saseKoh Chang eThailand.
Imimandla yelali ibanzi kwaye inxulunyaniswe nothungelwano lwayo lwabucala lweendlela ezihonjiswe kakuhle ngezityalo ezimibalabala zetropikhi. Zonke izixhobo zelali ezifana nemibhobho yamanzi, ifowuni kunye neentambo zombane zifihlwe phantsi komhlaba ukuze zisuse umqobo wemibono emihle.
Kukho izibonelelo ezibalaseleyo zoluntu ukuhlangabezana nolindelo lwasentshona kumgama olula wokuhamba wevilla. Kwisiphelo esisemantla selali kukho iKlabhu yaseLwandle, iphuli enkulu engapheliyo, iziko lemidlalo yamanzi kunye nebala legalufa. Kwisiphelo esisemazantsi kukho enye i-pool engapheliyo ene-bar emanzi. Indawo yokutyela, indawo yokutyela kunye nemidlalo iyakhiwa njengenxalenye yophuhliso lwaselwandle.
Ngalo lonke uhlobo lweenkonzo, nceda uqhagamshelane ne-concierge yethu uMnu. Tong
ukusuka kwiiNkonzo zeKhaya le-KC.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$295